Methandrostenolone (Dianabol) budada (72-63-9) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Qaar kale waxay / Methandrostenolone (Dianabol) budada
Rating: SKU: 72-63-9. Category: Qaar kale waxay
AASraw waxay ku jirtaa karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaam qiyaaseed oo ah methandrostenolone (Dianabol) budada (72-63-9), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Methandrostenolone (Dianabol) budada waa steroid afka laga jecel yahay oo waligeed ku dhuftay suuqa iyo mid ka mid ah steroids ugu caansan qaab kasta. In kastoo hadiyo goorba laga helo kiniin afka ah, Dianabol waxaa laga heli karaa xal loo isticmaali karo, laakiin kiniinnadu waxay u taagan yihiin wadada ugu muhiimsan ee maamulka.
Methandrostenolone (Dianabol) video budada ah
Methandrostenolone (Dianabol) budada aasaasiga ah characters
Product Name: Methandrostenolone (Dianabol) budada
Lambarka CAS: 72-63-9
Formula kelli: C20H28O2
Miisaankani waa: 300.44
Dhibcaha Biyaha: 163-164 ° C
Waa maxay Methandrostenolone / Dianabol Powder?
Dianabol waa magaca astaanta Metandienone, oo sidoo kale loo yaqaan methandienone ama methandrostenolone. Budada Dianabol CAS 72-63-9, waa budada midabka cad, waa qaybta ugu muhiimsan ee kiniiniga steroid Dianabol ee caanka ah.
Dianabol, oo sidoo kale loo yaqaan Dbol, ayaa ahayd steroid-kii ugu horreeyay ee abid la sameeyo. Waa daroogo la sameeyay oo la mid ah qaab dhismeedka testosterone (inkasta oo aysan ahayn androjiin). Dianabol waa la heli karaa midkood on u gaar ah ama lagu daro supplements kale. Waxaa jira boqollaal nooc oo Dianabol ah oo lagu iibiyo suuqa, laakiin intooda badan waa been abuur. Markaa, waa inaad kaliya ka iibsataa ilo sumcad leh haddii aad rabto inaad iska ilaaliso iibsashada kabka khatarta ah.
Methandrostenolone waa steroid-ka ugu badan ee loo isticmaalo ciyaartoyda iyo jir-dhisayaasha sababtoo ah waxay u shaqeysaa si dhakhso ah - siinta natiijooyin degdeg ah - waxayna ka caawin kartaa inay sii wataan waxqabadkooda jimicsiga. Waxay kordhisaa xajmiga muruqa, laakiin sidoo kale xoog, taas oo macnaheedu yahay inaad wax badan ka qaban karto jimicsiga. Waxay ka shaqeysaa iyada oo kordhinaysa xajinta nitrogen ee muruqyada si ay u qabtaan borotiin ka badan inta caadiga ah. Tani waxay ka dhigaysaa inay weynaadaan oo xoogaystaan ​​sababtoo ah korodhka tirada unugyada muruqa cusub ee la abuurayo.
Dianabol Methandrostenolone sidoo kale waxay ka caawisaa dib u soo kabashada ka dib fadhiyada miisaanka-tababarka iyadoo hagaajinaysa unugyada muruqa dhaawacan si ka dhakhso badan sidii caadiga ahayd. Inkastoo aysan saameyn ku yeelan wax soo saarka testosterone, Dianabol ma kordhiso qadarka testosterone lacag la'aan ah ee jirkaaga by diinta steroids kale galay T free, oo ay ku jiraan kuwa si dabiici ah soo saaray by gonads adiga kuu gaar ah iyo kuwa loo qaatay qayb ka mid ah a wareegga steroid. Natiijo ahaan, waxaad isticmaali kartaa wax yar oo weli waxaad heli kartaa natiijooyin wanaagsan sababtoo ah wax badan oo aad isticmaasho ayaa dhab ahaantii firfircoon.
Waa maxay budada Steroid Anabolic?
Anabolic steroids waxaa loo tixgelin karaa hormoono aan dabiici ahayn oo isku dayi kara inay kiciyaan hababka bayoolojiga qaarkood ee jirka heerarka sare.
steroids anabolic ceeriin waxaa sidoo kale laga yaabaa inay ku jiraan derivatives globular ee methionine amino acid waxaana lagu sii kala sooci karaa saddex fasal oo aasaasiga ah: testosterone, methionine, iyo estradiol.
Testosterone iyo methionine waa maamulaha iyo hormoonnada dabiiciga ah ee jidhka ku jira, halka estradiol laga yaabo inuu ku ekaado testosterone iyo hormoonnada kale ee kala duwan.
Anabolic steroids ayaa si weyn u iibsada oo ay isticmaalaan ciyaartoyda si ay u awoodaan inay dhisaan cufnaanta murqaha oo ay sidoo kale yeelan karaan xoog korodhay.
Waxa kale oo loo isticmaali karaa in lagu daweeyo dhaawacyada degdega ah, maaraynta calaamadaha menopause, lagu daweeyo cudurrada sida qanjirka 'prostatic hyperplasia', kor u qaadida bogsashada dhaawaca, iyo sidoo kale waxay dedejin karaan ka soo kabashada dhaawaca.
Taariikhda Methandrostenolone / Dianabol Powder
Steroids waxay dib ugu noqotaa 1935 markii saynisyahano Jarmal ah ay markii ugu horeysay sameeyeen testosterone. Inkasta oo markii hore loo isticmaalo daawaynta niyad-jabka, testosterone synthesized ayaa si dhakhso ah u noqday daroogada doorashada ciyaartoyda 1950-meeyadii.
Budada Dianabol Ceyriin waxay ahayd mid ka mid ah steroids-ka anabolic ee ugu horreeya ee lagu iibiyo ganacsi ahaan. Saynis yahanadu waxay u abuureen beddelka testosterone ee ciyaartoyda Ruushku bilaabeen inay isku duraan ciyaarihii Olombikada 1954kii. Cirbadaha testosterone waxay ka caawiyeen ragga qaadanaya tababarka ciyaaraha inay kordhiyaan waxqabadkooda, dhisaan unugyada murqaha, iyo inay lumiyaan dufanka xad-dhaafka ah.
steroids Legal waxay noqotay mid caan ah inta lagu jiro tababarka ciyaaraha fudud, iyo budada dhiska anabolic ee Dianabol waxay ahayd daaweyn aad waxtar u leh. Iyadoo dadka isticmaala loo baahan yahay in ay isku duraan noocyada kale ee steroids, Dianabol ahaa diyaar qaab kaniiniga. Kiniinadu waxay fududeeyeen isticmaalka steroid-ka oo degdeg ah in la qaybiyo.
Markii hore caan ka ah jir-dhisayaasha iyo ciyaartooyda kale, waxay si dhakhso ah u heshay caan ka mid ah ciyaartoyda aan ciyaaraha ahayn ee raadinaya inay kor u qaadaan muuqaalkooda. Ragga da'da yar ee la halgamaya dysmorphia muruqa ayaa bilaabay isticmaalka Dianabol si ay u dhisaan murqaha oo ay u lumiyaan dufanka.
Caannimada Dianabol waxay sii socotay ilaa 1985 sababtoo ah awooddeeda iyo helitaankeeda. Maadaama aysan u baahnayn irbado, ciyaartoy badan ayaa u arkay inay tahay beddel badbaado leh oo wax ku ool ah oo loo beddelo steroids kale. Nasiib darro, taasi waa laga fogaan waayay runta.
Sidee buu u shaqeeyaa Methandrostenolone/Dianabol Powder?
Hadafka Dianabol waa in la joogteeyo xaalad anabolic oo joogto ah ee jirkaaga. Tani waa meesha uu jirku dib u hagaajiyo oo uu dhiso unugyada muruqa. Waxa kale oo ay yaraynaysaa fursada ay ku yeelan karaan finanka ama bidaarta.
Waxay u muuqataa in habka ay Dianabol u shaqeyn karto ay saameynayso wax soo saarka testosterone. Testosterone waxay door muhiim ah ka ciyaari kartaa korodhka murqaha, xoogga, iyo sidoo kale waxay hagaajinaysaa dulqaadka. Marka heerarka testosterone kor loo qaado, muruq badan ayaa la dhisi karaa iyo heerarka tamarta laga yaabaa in ay arkaan sare u kacay sidoo kale.
Dbol waa kiciyeyaasha kordhiya isku-dhafka borotiinka ee unugyada muruqa. Tani waxay kaa caawinaysaa in muruqyadaadu u koraan oo ay dhaqso u hagaajiyaan. Dianabol waa anabolic iyo xoogga wadista ka dambeeya heerarka nitrogen ee jirka. Waxay kordhisaa heerarkan inta aad joogtid. Tani waxay ka dhigan tahay in boqolkiiba 100 qaadashada borotiinkaagu ay u socoto korodhka murqaha.
Faa'iidooyinka Methandrostenolone / Dianabol Powder
Methandrostenolone / Dianabol Powder waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo Dianabol afka, waa wax walba oo ku saabsan borotiinka. Helitaanka, badbaadinta, iyo isticmaalka si loo dhiso muruq adag. Xeryaha firfircoon ee Dianabol muruqa calaamadaha si ay u nuugaan asiidhyada amino badan ee dhiigga ka dibna u isticmaalaan si ay u abuuraan borotiinka muruqa ee heerka ugu dhakhsaha badan iyada oo loo marayo borotiinka kordhinta. Xeryahooda Dianabol waxay sidoo kale u sheegaan murqaha si ay u kaydiyaan asiidhyada amino-ka ee horeba gudaha muruqa iyagoo hoos u dhigaya hawlaha murqaha-luminta, taas oo abuurta dheef-shiid kiimikaad-baahida borotiinka waxayna ilaalisaa xaalad anabolic ah inta lagu jiro waqtiyada burburka borotiinka caadiga ah uu dhaco. Dianabol waxa ay caawisaa in muruqa adag ee la kasbado uu ahaado mid sugan. Sida aad arki karto, haddii aad tahay jidh dhise waxaad gabi ahaanba jeclaan doontaa alaabtan. Iibso budada Dianabol online maanta haddii aad rabto inaad aragto natiijooyin dhab ah!
Faa'iidooyinka si fiican loo yaqaan ee Methandrostenolone / Dianabol waxaa ka mid noqon kara:
Nidaamka Ilaalinta Murqaha wuxuuna Dhisayaa Murqaha Caatada ah
Beddelka Amino Acid Catalytic wuxuuna kor u qaadaa Isku-xidhka Protein-ka
Dabiiciga ah Anabolic steroidal iyo Samaynta Ka-hortagga Proteolytic
Waxay kordhisaa Heerarka Testosterone waxayna Kobcisaa Waxqabadka Ciyaaraha
Waxay u ogolaataa kicinta degdega ah ee borotiinka
Waxa ku jira isku-dhafyada Anabolic ee Awooda leh iyo Hormoonnada Dhismaha Murqaha
Ka kooban 3-Hydroxy-1,4-androstadien-17-mid loogu talagalay Kordhinta Wax soo saarka Unugyada Cas ee Dhiigga
Waxay bixisa faa'iido tartiib ah laakiin joogta ah ee xoogga iyo murqaha tayada leh
Waxay ka caawisaa inay yarayso haynta biyaha maqaarka hoostiisa
Methandrostenolone/Dianabol Qiyaasta Budada, Wareegtada
Haddii aad raadinayso qiyaasta Dbol ee kaa dhigi doonta inaad u ekaato xayawaan, tani waxay noqon kartaa meesha laga raadiyo.
Inkasta oo wareegga Dbol keligiis la isticmaali karo, waa inaadan iska indhatirin waxyeelada hoos ku xusan.
Waa inaad qaadataa inta u dhaxaysa 30-50mg ee qiyaasta Dianabol maalin kasta, cunto haddii ay suurtagal tahay, wareegga 6-usbuuc. Waxaa muhiim ah in lagu dhajiyo gudaha wakhtiga loo qoondeeyay maaddaama ay leedahay saameyn sun ah (sida Anabol) taas oo keeni karta dhaawac beerka ah.
Haddii aad rabto in aad ku dhegto dariiqa kaliya ee Dbol, ku xaddid wakhtigaaga 4-5 usbuuc.
Dianabol waxay leedahay nolol shelf oo aad u gaaban. Waa in la cunaa 30-50mg oo kordhay maalintii oo dhan. Adigoo ku beddelanaya qiyaasta Methandrostenolone ee maalinlaha ah ee cuntada, waxaad kaa caawin kartaa dhimista lallabbo ama calool xanuun, oo weli sii wad heerarka dhiigga ee ugu sarreeya.
Budada ceeriin Dianabol waxaa laga iibsan karaa 10g,50g,100g,500g...iwm.
Methandrostenolone / Dianabol nolosha kala bar
Dianabol (Methandienone) waxay leedahay nolol nus gaaban oo 5-6 saacadood ah. Tani waa sababta lagu taliyey in la qaato laba jeer maalintii.
Saamaynta Dhinacyada ee Methandrostenolone / Dianabol Powder
Waxyeellooyinka caadiga ah waxay u egyihiin Methandrostenolone / Dianabol Powder:
Gynecomastia – kani waxa keena haynta biyaha ee unugyada laabtaada, markaa waxaad u baahan doontaa inaad iska ilaaliso qaadashada wax badan ama baaskiil wadida muddo dheer.
Kordhinta gardarrada - tani ma saameynayso qof kasta oo qaata Dianabol, laakiin ciyaartoyda qaar ayaa sheegay in ay dareemayaan xanaaq badan ka dib qaadashada. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad hagaajiso jimicsigaaga, laakiin sidoo kale waxay keeni kartaa xoogaa dhibaatooyin ah haddii aad rabto jawi deggan oo kugu xeeran ama aad leedahay taariikh rabshado.
Xiniinyaha oo yaraada - iyadoo tani ay aad ugu badan tahay ciyaartoyda isku duro steroidskooda, waxay ku dhici kartaa qof kasta oo afka ka qaata Dianabol sidoo kale. Calaamadahani maaha kuwo dib loo celin karo oo inta badan iskeed isu roga ka dib marka wareeggaagu dhamaado, laakiin waxay noqon kartaa murugo haddii aad rabto inaad qoys bilowdo.
Iibso Methandrostenolone/Dianabol Powder
Waxaad awoodi kartaa by Dianabol (Methandrostenolone) qiimo jaban, oo ku saabsan USD40 ee 100 kiniin ah 10mg heerka. Marka la barbardhigo kiniinka afka, iibso Dianbol budada cayriin waxay noqon doontaa mid tartan badan, haddii aad xiisaynayso inaad sameyso Dianabol afkaaga, Dianabol (Methandrostenolone) budada online waa doorasho wanaagsan.
 Diiwaanka Federaalka. Xafiiska Diiwaangelinta Federaalka, Adeegga Kaydka iyo Kaydka Qaranka, Maamulka Adeegyada Guud. 18 Janaayo 1983. bogga 2208-2209.
 Schänzer W, Geyer H, Donike M (Abriil 1991). "Metabolism of metandienone in man: aqoonsiga iyo isku-darka dheef-shiid kiimikaad ee kaadida ee la isku daray, go'aaminta heerarka qashin-saarka iyo gaaska-chromatographic-mass spectrometric spectrometric aqoonsiga ee bis-hydroxylated metabolites". Joornaalka Biochemistry-ka Steroid iyo Biology-ga Molecular. 38 (4): 441-64. doi:10.1016/0960-0760(91)90332-y. PMID 2031859. S2CID 20197705.
 Yesalis CE, Anderson WA, Buckley WE, Wright JE (1990). "Dhacdooyinka isticmaalka aan dawooyinka ahayn ee steroids anabolic-androgenic" (PDF). NIDA Research Monograph. 102: 97-112. PMID 2079979.
 Schänzer W, Geyer H, Fusshöller G, Halatcheva N, Kohler M, Parr MK, Guddat S, Thomas A, Thevis M (2006). "Aqoonsiga spectrometric mass iyo sifada dheef-shiid kiimikaad mustaqbalka fog ee metandienone ee kaadida aadanaha". Isgaarsiinta Degdegga ah ee Mass Spectrometry. 20 (15): 2252–8. Bibcode:2006RCMS…20.2252S. doi:10.1002/rcm.2587. PMID 16804957.